လေနုအေး: နည်းပညာ နှင့် ဆိတ်ကွယ်ရာ
Posted by တန်ခူး at 1:10 PM
တလောလေးက ကြည့်မိတဲ့ Disconnect ဆိုတဲ့ ကားကလေးကို သွားသတိရမိတယ်။ တိုးတက်နေတဲ့ နည်းပညာကို အသုံးချပြီး အနိုင်ကျင့်မှုတွေ၊ ကျဉ်းမြောင်းလာတဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်တွေ၊ လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုတွေကို အဖြစ်အပျက်သုံးခုကို အခြေခံပြီး ပြထားတာမို့ သင်ခန်းစာယူစရာကောင်းတယ်။ တိုတောင်းလှတဲ့ သက်တမ်းလေး အတွင်းမှာ တယောက်ကို တယောက် ဘာကြောင့်များ.........
it is really sad and i am also same feeling that you said in video. i cannot watch end .
Also good post !
မကောင်းဟူသည် ဆိတ်ကွယ်ရာ မရှိဆိုတဲ့ စကားကတော့ သိပ်ကိုမှန်တာပါပဲ။ အခုလို နည်းပညာခေတ်ကြီးမှာ အရာအရာကို အလွယ်တကူ ရုပ်ကော၊အသံကော ဖမ်းယူ၊ အင်တာနက်ပေါ် တင်လိုက်ရုံနဲ့ အပျက်ပျက် နှာခေါင်းသွေးထွက်စေမယ့် ကိစ္စတွေ အများကြီးပါ။ နည်းပညာရဲ့ ထွန်းကားမှုကို မှန်ကန်စွာ အသုံးချတတ်ပါစေ၊ လူတိုင်းလူတိုင်း ကိုယ်ချင်းစာတရားကို လက်ကိုင်ထားနိုင်ပါစေ၊ ရှေ့တင်နဲ့ ကွယ်ရာက လုပ်ရပ်တွေ ထပ်တူညီကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရုံမှတပါး .. ။